I-Autodesk yazisa "ngeGumbi eliKhulu" leeNgcali zoLwakhiwo
Izisombululo ze-Autodesk Construction zisandula ukubhengeza ukumiliselwa kweGumbi eliKhulu, indawo eku-intanethi evumela iingcali zokwakha ukuba zinxibelelane nabanye abakweli shishini kwaye banxibelelane ngqo neqela le-Autodesk Construction Cloud. Igumbi elikhulu liziko elikwi-intanethi elinikezelwe ngokucacileyo kwiingcali ...
Ndinolu luhlu lwe-Excel. Kule ndawo kukho ulungelelwaniso lwe-X, ulungelelwaniso lwe-Y, kunye negama le-vertex. Into endiyifunayo kukuyidweba kwi-AutoCAD. Kule meko siza kusebenzisa ukwenziwa kwezikripthi ezivela kwisicatshulwa esidityanisiweyo kwi-Excel. Qinisekisa umthetho wokufaka amanqaku kwi ...
AutoDesk Office for ebulalayo
Olu lukhuphiswano oluvuza eyona mizamo yesoftware ijolise kwi-Architecture, Ubunjineli kunye noKwakha. Olu luhlu lokugqibela lusixelela ukuba ukhuphiswano phakathi kwababoneleli abaphambili bezisombululo zeekhompyuter kubunjineli be-geo lukwinguqulelo yeshumi elinesithathu. Simakishe ngombala owahlukileyo ezinye iimveliso esizikhethileyo ukulungiselela ...
AutoCAD-AutoDesk, ezintsha, Microstation-Bentley
Ndiye ebaleni, kwaye ndivavanye amanqaku e-11 epropathi, njengoko kubonisiwe kumzobo. I-7 yala manqaku yimida yendawo engenamntu, kwaye ezine ziikona zendlu ephakanyisiweyo. Xa ndikhuphela idatha, ndiyiguqulele kwifayile eyahlulwe ngokhefana, eyaziwa njenge ...
AutoCAD-AutoDesk, cadastre, Topography
Iinguqulelo zemfundo ze-AutoCAD zisebenza ngokupheleleyo kubo bobabini abafundi nootitshala. Ukukhuphela uguqulelo lomfundi we-AutoCAD, kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo: 1. Fikelela kwiphepha le-AutoDesk. Ngena kwiakhawunti yakho okanye wenze entsha. Kuya kufuneka ukhethe udidi lokukhuphela olukhutshelweyo lwemfundo: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Kule meko, ndi…
Kwiminyaka engama-20 kamva, ndingadibanisa kuphela i-BIM njengendaleko eyayibonisa ngelo xesha, ndishiya ibhodi yokuzoba kunye nokulandela iphepha kwiifayile zeCAD. Yayiyindaleko enomdla leyo, ucinga ukuba uvela ekubeni ngumzobi kunye nekhaltyhuleyitha yeencwadana + yokubala + iLotus 123. Kubonakala kumangalisa kum ukukholelwa ...
Okufumaneka, Zobunjineli, Microstation-Bentley, egeomates My
Kwimeko yethu yeGeo-Injineli, igama elithi BIM (Ukwakha iModeli yoLwakhiwo) ayisenguye inoveli, evumela izinto ezahlukeneyo zobomi bokwenyani ukuba zimodareyithwe, kungekuphela ekubonakalisweni kwemizobo kodwa nakwizigaba ezahlukeneyo zomjikelo wobomi. . Kuthetha ukuba indlela, ibhulorho, ivelufa, umjelo wamanzi, isakhiwo, ...
AutoCAD-AutoDesk, Okufumaneka, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, egeomates My
Lifikile ixesha lokuvala eli phepha, nanjengoko kusenzeka ngokwesiko lethu kuthi abo bavala imijikelo yonyaka, ndiyeka imigca embalwa yento ebesinokuyilindela ngo-2014. Siza kuthetha kakhulu kamva kodwa namhlanje, okukulo nyaka uphelileyo: Ngokungafaniyo nezinye iinzululwazi , kwezethu, iintsingiselo zichazwa sisangqa ...
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, GvSIG, GIS asibonise, Microstation-Bentley, SuperGIS, UDig, Ezahlukeneyo
Ngokubanzi, xa besithumela ifayile ye-dwg kuhlala kukho ingxaki ngenxa yenguqulo abagcinwe ngayo. Nazi ezinye zeendlela zokusombulula ingxaki.
Ngamazwi alula, i-BIM (iModeli yoLwakhiwo yoLwakhiwo) kukuvela kwengcinga yesiko ebizwa ngokuba yi-CAD (Uyilo oluNcedisiweyo lweKhompyuter) kwaye nangona kukho iincwadi ezipheleleyo ezibhalwe malunga noku emva kokuba uJerry Laiserin elikhulisile eli kota, ngeenjongo zemfundo siya kuzama ukuba lula ngokusemandleni: Ngaphambi, xa uyila isakhiwo, umakhi emva kwendibaniselwano elungileyo ...
Okufumaneka, ezintsha, Microstation-Bentley
Ezinye zeendaba esizibonileyo kuhlobo lwe-beta ye-AutoCAD 2013 ebize le nguqulo imihlathi isixelela ukuba zeziphi izinto esiza kuthi sizibone ngo-Epreli 2012, xa izokwaziswa ngokusesikweni; nangona singayetyisanga i-AutoCAD entsha ka-2012. Zisuka nje, iindaba esele zaziwa: Ifomathi entsha ye-dwg 2013!. I…
AutoCAD-AutoDesk, ezintsha, egeomates My
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 8 kwiphepha elilandelayo